बैतडीमा एक करोड बढीका हिउँदे फलफूलका बिरुवा विक्रि | सुदुरपश्चिम खबर
बैतडी, १७ चैत– बैतडीबाट यो बर्ष झण्डै एक करोड बराबरका हिउँदे फलफूलका बिरुवा विक्रि भएका छन् । सुख्खा फलपूmल विकास केन्द्र सतबाँझको नर्सरी र निजी नर्सरीहरुबाट हिउँदे फलफूलका बिरुवा विक्रि भएका हुन् । हिउँदे फलफूलका बिरुवा विक्रि गरेर सुख्खा फलफूल विकास केन्द्रले २८ लाख ६२ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।
यस्तै फलफूलका बिरुवा विक्रि गरेर लाखौं आम्दानी भएको किसानहरुले बताएका छन् । निजी नर्सरीबाटै फलफूलका बिरुवा विक्रि गरेर बार्षिक ५ लाख बढी आम्दानी हुने गरेको मायाप्रकाश निजी नर्सरीका सञ्चालक देवदत्त भट्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हाम्रो दशरथचन्द नगरपालिका वडा नं १ का १८ बढी फलफूलका निजी नर्सरी छन् । हामीहरुले नर्सरीबाटै आम्दानी गरिरहेका छौं ।’
फलफूलका बिरुवाबाट बर्षेनी राम्रो आम्दानी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । तर यो बर्ष भने अरु बर्षको तुलनामा कम आम्दानी भएको किसानहरुले बताएका छन् । यो बर्ष ओखर, नासपाती र अनारका बिरुवा कम विक्रि भएका किसान नवराज भट्टले बताउनुभयो । कतिपय स्थानीय तहहरुले कृषिमा छुट्याएको बजेट कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गरेकाले पनि फलफूलका बिरुवा कम विक्रि भएका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
ओखरका बिजु बिरुवा भन्दा कलमी बिरुवामा किसानको आकर्षण भएकाले पनि ओखर बिरुवा विक्रि हुन नसकेको सुख्खा फलफूल विकास केन्द्र सतबाँझका प्रमुख डम्मरसिंह भाटले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका वडा नं १ र सुर्नया गाउँपालिका २ मा गरी २३ भन्दा बढी निजी नर्सरी रहेका छन् । निजी नर्सरीबाट उत्पादित फलफूलका बिरुवा किसानका लागि गतिलो आम्दानीको श्रोत समेत बनेको छ ।
यहाँका निजी नर्सरीमा उत्पादन भएका फलफूलका बिरुवा देशका विभिन्न ठाउँमा विक्रि वितरण हुने गरेको सुख्खा फलफूल विकास केन्द्रका प्राविधिक सहायक अर्जुन खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
(रेडियो निङ्गलाशैनीबाट साभार)
बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका वडा नं ३ मा गरिएको तालाबन्दी खुल्यो !!
बैतडी : १० ओटै स्थानीय तहका केन्द्रमा सडक पुग्यो
बझाङमा शिक्षक पक्राउ !!
सीमा नाकाका हेल्थ डेस्कमा कोरोना पुष्टि हुने व्यक्तिलाई यी १४ अस्पतालबाट सेवा दिइने (सुची सहित)